Home Wararka Galmudug oo Rabta in la soo Xero Sheekh Shakir
Taliska Ciidamada Booliiska Galmudug ayaa soo bandhigay magacyada & Sawirrada 36-qof oo Galmudug u aqoonsatey in ay yihiin dambiilayaal, kuwaas oo la farey laamaha amniga ee Galmudug iyo muumalada kaleba in ay gacan ka geystaan soo qabashadooda, waxaayna ka tirsan yihiin xoogagga Ahlusunna.
Raggan la baadi goobayo ayaa waxaa ugu horeeya sida qoraalka la baahiyey ku cad hoggaamiyiha kooxda la baxdey Ahlusunna Sheekh Maxamwd Shaakir Cali Xasan iyo 35 kamid ah Saraakiisha Ciidamadiisa ee dagaalka kula galay Dhuusamareeb & Guriceel Ciidamada dowladda & kuwa Galmudug.
Afhayeenka Ciidamada Booliska Galmudug Nuur Cilmi ayaa sheegay inay soo gunaanadeen wajigii 1-aad ee howlgalka ka dhanka ah Ahluusnna, sisoo kalena uu billaawday waji labaad oo ay kusoo qaban doonaan dambiilayaasha oo ay rabaan in dowladaha dariska ah iyo laamaha amniga guddahaba ay ka howlgalaan in cadaalada la hor-keeno.
Maamulka Galmudug ayaa tan iyo markiinla dhisay waxaa caqabad iyo dagaal uu kala kulmayay xoogagga Ahlusunna Waljamaaca taas oo ay u sii dheer tahay Ururka Al-Shabaab oo degaannada qaar gacanta ku haaya marar badana weeraro ka fuliyay degaano katirsan Galmudug.
Previous articleMW Xasan Sheekh oo Sheegay In Mareykanku yahay Saaxib Ła isku hallayn karo.
Next articleMW Xasan Sheekh oo Wada Kulammo logu Adeegayo Dalka.
Saciid Deni oo mowqif dhexdhexaadnimo ka qaatay Gardarradii Farmaajo